🥇 ▷ Habka mugdiga ah ee 'auto dark' wuxuu ku yimaadaa Android 10 oo leh codsigan ✅
Habka mugdiga ah ee ‘auto dark’ wuxuu ku yimaadaa Android 10 oo leh codsigan
Waqti dheer oo sugitaan ah kadib Android ayaa ugu dambeyntii leh qaab mugdi ah oo dhammeystiran, hab lagu beddelo interface ka midabada iftiinka caadiga ah iyo kuwa mugdiga ah. Android 10 waxay ku faantaa inay awood u leedahay inay la jaan qaado baahideena, laakiin taas si otomaatig ah uma sameyso.
Si loo beddelo habka ay tahay inaan tagno goobta ay khusayso, ama aan dhaqaajinno habka badbaadinta awoodda. Laakiin Thanks to codsi dhawaan lagu daabacay Google Play Store, si toos ah ayaan u sameyn karnaa.
Habka mugdiga ah ee ‘auto dark’ wuxuu ku yimaadaa Android 10
Anaga oo adeegsanayna barnaamijka ‘Automatic Dark Theme’ ee loogu talagalay dalabka Android 10 waxaan ku ogan karnaa barnaamijka waqtiga mugdiga ah uu shaqeynayo oo u shaqeynayo, haddii aan rabno inuu had iyo jeer ahaado habeenkii, ama waqti cayiman.
Dhibaatadu waxay tahay inkasta oo rakibidu ay fududahay oo loo sameeyo sida codsi kale, laga bilaabo dukaanka Google, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado dhowr tillaabo oo dheeraad ah iyada oo loo marayo ADB-ga aan ku rakibnay kumbuyuutarradeenna. Kuwani waa tillaabooyinka ay tahay in aan raacno:
Waxaan ku rakibnaa dalabka.
Waxaan mobilada ku xirnaa kombuyutarka fiilada.
Waxaan daaqadda amarrada ka furi doonnaa isla faylka aan ku soo dejisanay habka ‘ADB binary’.
Waxaan codsiga ku furi karnaa moobiilka.
Amarkan waxaan ku fulineynaa kombuyutarka:
Soosaarahu wuxuu doonayaa inuu horay u mariyo dalabka isagoo abuuraya qaab shaqeynaya oo baabi’iya qaabkan mugdiga ah ee ku xiran qorrax dhaca iyo qorrax dhaca, inkasta oo xilligan la joogo aysan ahayn wax shaqeynaya.
Dhanka kale, waa inaan ogaano in dalabka uu shaqeyn doono marka taleefanka la xiro (si looga fogaado xiritaanka appka aan isticmaaleyno) waana cadeyn karnaa waqtiga firfircoonida ee mowduuc kasta, iftiinka iyo mugdiga.
Mawduuca Madoow ee Tooska ah ee loogu talagalay Android 10 Nooca: Qoraaga: Waxaa loo baahan yahay GUDAHA GUDAHA Cabbirka: